ရှေ့နေတစ်ဦး ပြောဆိုချက်အရ တရားပြန်စွဲခံရဖို့ အခြေအနေရှိနေတဲ့ မယားကြီးဖြစ်သူ ( သူ့အမှားကနေ ကိုယ့်အမှားဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ သတိပြုစရာ ဥပဒေ ) •
ရှေ့နေတစ်ဦး ပြောဆိုချက်အရ တရားပြန်စွဲခံရဖို့ အခြေအနေရှိနေတဲ့ မယားကြီးဖြစ်သူ ( သူ့အမှားကနေ ကိုယ့်အမှားဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ သတိပြုစရာ ဥပဒေ )
21/11/2019 Yan Naing ဗဟုသုတ 0
ရှေ့နေတစ်ဦး ပြောဆိုချက်အရ တရားပြန်စွဲခံရဖို့ အခြေအနေရှိနေတဲ့ မယားကြီးဖြစ်သူ
မယားကြီးဖြစ်သူက သူမယောကျာ်းနဲ့ မယားငယ်ကို ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာ ရဲတွေနဲ့ ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးကာ အမှုဖွင့်ခဲ့တဲ့ သတင်းကို ပရိသတ်ကြီးလည်း အားလုံးသိကြပြီးဖြစ်မှာပါ .. .။ ဒီလို ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့ Video ဖိုင်ဟာ လူမှုကွန်ယက်မှာ အလွန်ကို ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး ထင်မြင်ချက်တွေအမျိုးမျိုးလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ် … ။
ဒီထင်မြင်ချက်တွေထဲမှာ ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးရဲရင့် ဝေ ရဲ့ ထင်မြင်ချက်လေးကတော့ လူမှုကွန်ယက်မှာ အထူးပျံ့နှံ့နေတာဖြစ်ပြီး သတိထားစရာ ကိစ္စရပ်လေးလည်းဖြစ်တာမို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် … ။
ဦးရဲရင့်ဝေက မနက်က Video File ကြည့်လိုက်ရတယ် …
ရှေ့နေကြည့်တော့ ရှေ့နေအမြင်ပေါ့ …
သတိပေးချင်တာလေးလည်းတွေ့လို့ ပြောတော်မူဖို့ စာကိုသီတယ်ပေါ့ဗျာ …
တစ်လင်တစ်မယားကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေက အရပ်သားနားလည်အောင် လူပြိန်းပြောပြောရရင် ကျူးလွန်သူ(၂)ယောက်လုံး အိမ်ထောင်ရှင်ဖြစ်နေမှ နှစ်ယောက်လုံးကို တရားစွဲလို့ရတာပါ …
ဥပမာ – ကျွန်တော့အမျိုးသမီးက ကျွန်တော့ကို သင်ဇာဝင့်ကျော်နဲ့ ဖောက်ပြန်တယ်လို့ စွပ်စွဲတိုင်ကြားတယ်ဆိုပါစို့( ဤကားဥပမာတည်း ကျွန်တော်က အိမ်ထောင်ရှင်ဖြစ်လို့ တရားစွဲခံရမှာဖြစ်ပေမယ့် သင်ဇာလေးက(အဟိ) အိမ်ထောင်မရှိသူ အပျိုဖြစ်လို့ တရားစွဲခံရမှာ မဟုတ်ပါဘူး …
မနက်က Video File ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ … Video ရိုက်ပြီး Facebook မှာတင် အရှက်ခွဲသလိုလုပ်ထားတာ သွားတွေ့ရတယ် …
ကာယကံရှင်အမျိုးသမီးအနေနဲ့ ဒေါသအလျောက်လုပ်မိတာဖြစ်နိုင်ပေမယ့် Video ရိုက်ပြီး အတင်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးက တရားပြန်စွဲဖို့ အခွင့်အရေးပေးလိုက်သလိုပါပဲ …
ဘာတွေနဲ့ တရားစွဲနိုင်လဲဆိုတော့ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေတို့ နိုင်/လွတ်/လုံ တို့နဲ့ပါပဲ … ဒါလေးကို သတိချပ်ကြစေချင်ပါတယ် …
ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာပါ … ။ သူ့အလွန်ကကိုယ့်အလွန်ဖြစ်မသွားရ စေအောင် ရှေ့နေတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဥပဒေ ရှူထောင့်က နေ ဖော်ပြထားတာမလို့ ဗဟုသုတ တစ်ခုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် …. ။
သူ့အမှားကနေ ကိုယျ့အမှားဖွဈသှားနိုငျတဲ့ သတိပွုစရာ ဥပဒေ
ရှနေ့တေဈဦး ပွောဆိုခကျြအရ တရားပွနျစှဲခံရဖို့ အခွအေနရှေိနတေဲ့ မယားကွီးဖွဈသူ
မယားကွီးဖွဈသူက သူမယောကျြားနဲ့ မယားငယျကို ဟိုတယျခနျးထဲမှာ ရဲတှနေဲ့ ဝငျရောကျဖမျးဆီးကာ အမှုဖှငျ့ခဲ့တဲ့ သတငျးကို ပရိသတျကွီးလညျး အားလုံးသိကွပွီးဖွဈမှာပါ .. .။ ဒီလို ဝငျရောကျဖမျးဆီးတဲ့ Video ဖိုငျဟာ လူမှုကှနျယကျမှာ အလှနျကို ပြံ့နှံ့သှားခဲ့ပွီး ထငျမွငျခကျြတှအေမြိုးမြိုးလညျးထှကျပျေါလာခဲ့ပါတယျ … ။
ဒီထငျမွငျခကျြတှထေဲမှာ ရှနေ့တေဈဦးဖွဈတဲ့ ဦးရဲရငျ့ ဝေ ရဲ့ ထငျမွငျခကျြလေးကတော့ လူမှုကှနျယကျမှာ အထူးပြံ့နှံ့နတောဖွဈပွီး သတိထားစရာ ကိစ်စရပျလေးလညျးဖွဈတာမို့ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော … ။
ဦးရဲရငျ့ဝကေ မနကျက Video File ကွညျ့လိုကျရတယျ …
ရှနေ့ကွေညျ့တော့ ရှနေ့အေမွငျပေါ့ …
သတိပေးခငျြတာလေးလညျးတှလေို့ ပွောတျောမူဖို့ စာကိုသီတယျပေါ့ဗြာ …
တဈလငျတဈမယားကငျြ့သုံးခွငျးဆိုငျရာဥပဒကေ အရပျသားနားလညျအောငျ လူပွိနျးပွောပွောရရငျ ကြူးလှနျသူ(၂)ယောကျလုံး အိမျထောငျရှငျဖွဈနမှေ နှဈယောကျလုံးကို တရားစှဲလို့ရတာပါ …
ဥပမာ – ကြှနျတော့အမြိုးသမီးက ကြှနျတော့ကို သငျဇာဝငျ့ကြျောနဲ့ ဖောကျပွနျတယျလို့ စှပျစှဲတိုငျကွားတယျဆိုပါစို့( ဤကားဥပမာတညျး ကြှနျတျောက အိမျထောငျရှငျဖွဈလို့ တရားစှဲခံရမှာဖွဈပမေယျ့ သငျဇာလေးက(အဟိ) အိမျထောငျမရှိသူ အပြိုဖွဈလို့ တရားစှဲခံရမှာ မဟုတျပါဘူး …
မနကျက Video File ကိုကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ ဘာသှားတှလေဲ့ဆိုတော့ … Video ရိုကျပွီး Facebook မှာတငျ အရှကျခှဲသလိုလုပျထားတာ သှားတှရေ့တယျ …
ကာယကံရှငျအမြိုးသမီးအနနေဲ့ ဒေါသအလြောကျလုပျမိတာဖွဈနိုငျပမေယျ့ Video ရိုကျပွီး အတငျခံရတဲ့ အမြိုးသမီးက တရားပွနျစှဲဖို့ အခှငျ့အရေးပေးလိုကျသလိုပါပဲ …
ဘာတှနေဲ့ တရားစှဲနိုငျလဲဆိုတော့ ဆကျသှယျရေးဥပဒတေို့ နိုငျ/လှတျ/လုံ တို့နဲ့ပါပဲ … ဒါလေးကို သတိခပျြကွစခေငျြပါတယျ …
ဆိုပွီးဖျောပွထားတာပါ … ။ သူ့အလှနျကကိုယျ့အလှနျဖွဈမသှားရ စအေောငျ ရှနေ့တေဈယောကျအနနေဲ့ ဥပဒေ ရှူထောငျ့က နေ ဖျောပွထားတာမလို့ ဗဟုသုတ တဈခုအနနေဲ့တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော …. ။
ဆေးခြောက်နေ့တိုင်းသောက်နိုင်တာနဲ့ တစ်နှစ်ကို သိန်းလေးရာကျော်ပေးမယ့် အမေရိကန် ကုမ္ပဏီ
အချိန်မတော် ငွေထုတ်ဖို့ ဘဏ်ထဲကို ဝင်လိုက်တဲ့ အမျိုးသား ၊ ဘဏ်ထဲမှာ တံခါးအလိုလို ပိတ်မိသွားတဲ့ အဖြစ်
Total Hits : 1248250